यी युवतीको टिकटकमा यस्तो हर्क’त, यतिबेला भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो) - News36media
October 10, 2020 News36mediaLeaveaComment on यी युवतीको टिकटकमा यस्तो हर्क’त, यतिबेला भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो)
श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमानसंग किन नजिक हुन्छन त जब आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरु कै श्रीमान संग सल्किने गरेको देख्न पाइन्छ बिसेषगरि पछिल्लो समय श्रीमानहरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग सल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ । सबैलाइ त्यसो भन्न मिल्दैन तर खासगरी श्रीमान विदेश हुने महिलाहरु अर्कै पुरुष संग मो’ज म’स्ती गरि श्रीमान ले विदेशमा दुःख गरि कमाएको सारा सम्पति लिएर अर्कै पुरुष संग हिडेको हामी देख्न र सुन्न पाउछौ ।***तलको भिडियो हेर्नुहोस***
एक श्रीमान नेपाल मै भएको महिलाहरु पनि अर्कै पुरुषहरु संग सल्केको देख्न पाइन्छ बिसेष गरि श्रीमान विदेश मा हुने महिलाहरु धेरै देख्न पाइन्छ । यो समाचार को भिडियो अन्तिममा छ अर्को समाचार पढनुहोस । भोलिपल्ट विहानै आमा (हजुरआमा) लाई भनें, आमाले अब तँ ठूली भइ’स भन्नुभयो ।
अनि त्यही दिनबाट म हजुरबासँग सुत्न छाडिदिएँ । ती १२ वर्षे किशोरीलाई कसले भनिदिनुु स्त’न पो’टाउने बेलामा दुख्छ भनेर । समय कहाँ एकै रहन्छ र ? अहिले ती १२ वर्षे किशोरी आमा भएको पनि १२ वर्ष नै भयो ।
सायद छोरीलाई पनि त्यस्तै भयो होला वा हुने बेला पो भयो कि ? छोरीलाई यो बेलामा यस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो अनुभव भनेकी होलिन कि ? छोरीले जिज्ञासाको भकारी खोेलेपछि मात्रै जवाफ देलिन कुन्नि ? **यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला**
अबदेखि दशैंसम्मका लागि कडा नियम(भिडियो)
June 29, 2020 June 29, 2020 News36media
August 20, 2020 News36media
May 9, 2020 News36media